मासु पर्यटन: देश को स्वाद को एक पोर्ट्रेट आकर्षित!
को मासु, पर्यटन के हो? यो प्रवेश गर्न र इतिहास र खाना को कारण बारे थप जान्नको लागि संसारको मानिसहरूका को पाक संस्कृति बुझ्न र, अन्तमा, तिनीहरूलाई कसरी पकाउन सिक्न, विभिन्न देशका स्वादिष्ट संरक्षित प्रयास गर्न एक वास्तविक मौका छ। मासु पर्यटन - केवल यात्रा भन्दा बढी केहि, यो चयन गरिएको क्षेत्र को परम्परागत भाँडा साँच्चै खुशी ल्याइएको हो स्वाद गतिविधिहरु को एक दायरा, विस्तार गर्न ध्यान छ।
जो पर्यटन मासु गर्न सक्नुहुन्छ?
धेरै छिटो यात्रा यस प्रकारको को लोकप्रियता बढ्दै। किन यो छ? सायद पारंपरिक पर्यटन केही नयाँ असामान्य र विभिन्न प्रयास गर्न इच्छा। यो बावजुद मासु पर्यटन - उत्सुक खाद्य को धेरै सपना "मूल मा" अपरिचित व्यञ्जन को स्वाद आनन्द। यो पर्यटन को प्रकारको sommeliers, रेस्टुरेन्ट आलोचक, tasters र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय को दुनिया मा rotates गर्नेहरूका लागि रोचक र उपयोगी हुनेछ। मासु फ्रान्स, गर्न पर्यटन इटाली, ब्राजिल र यति मा। डी, नयाँ ज्ञान र सीप हासिल गर्न व्यावसायिक स्तर सुधार, मदत गर्नुहुनेछ मूल्यवान अनुभव हासिल। यात्रा कम्पनीहरु पक्कै अन्य उद्देश्यहरू पछि लाग्न हुनेछ: आफ्नै व्यवसाय को सीमाहरु विस्तार र आफ्नो ग्राहकहरु गर्न मासु यात्रा भेटी सुरु गर्न।
फ्रान्स - रानी "स्वादिष्ट" युरोप मा पर्यटन
फ्रान्सेली को धेरै गर्व र आफ्नो भोजन मूल्यांकन गर्छौं। 2010 मा मौका द्वारा, यूनेस्को intangible सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा मा यो देश गराएको छैन। बिल्कुल सबै पर्यटकहरूको को बिना को यात्रा को उद्देश्य, पहिलो कुरा म पेरिस गर्न रोक्नुहोस्। यो स्थान अलग प्रत्येक क्षेत्र को विशेषताहरु संयुक्त किनभने मासु पर्यटन सहित यहाँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईंले आफ्नो यात्रा जारी राख्न सक्नुहुन्छ:
Ile-डे-फ्रान्स, जहाँ तपाईं वास्तविक सस Bercy र macedoine, बन्दागोभी केक र पनीर Colum स्वाद गर्न सक्छन्।
एक्विटेन - तपाईंको ध्यान रक्सी सस, shallots र साग मा mussels र Oysters प्रस्तुत गरिनेछ।
नोर्माण्डी र ब्रिटनी - सूप buyyabes (Marseilles कान), माछा साइडर र बादाम संग प्रयास गर्नुहोस्।
Savoie दाखबारी, बरद, को लयर उपत्यका र Rhone।
यो एक निश्चित स्थानमा कि उल्लेख गर्नुपर्छ फ्रान्सेली भोजन धुनमा pate, sausages, escalopes: लिन्छ र मासु। बिल्कुल सबै डेयरी उत्पादन उच्चतम गुणस्तर को उत्पादन गर्दै: Mondor, Camembert, Charolais, epaus। फ्रान्स मासु पर्यटन फ्रान्सेली व्यञ्जन पकाउन प्रयास गर्न, मूल व्यञ्जनहरु अनुसार तयार भाँडा स्वाद मात्र एक अद्वितीय मौका प्रदान गर्नेछ, तर पनि सबै भन्दा प्रसिद्ध रेस्टुरेन्ट भ्रमण गर्न, शेफ संग mingle, र अन्तमा।
इटाली - "मोशाको" रहन क्षेत्रहरु को परम्परा
यो राज्य यसको क्षेत्रहरु को पाक विविधता मा नै प्रकट जो कृषि, संग शताब्दीयौंदेखि पुरानो सम्बन्ध कायम छ। इटाली मासु पर्यटन तपाईं इटालियन भोजन को दुनिया को जादुई वातावरण सास फेर्न र राम्रो स्वाद को बाटो मा प्रारंभ गर्न मद्दत गर्नेछ। देश को क्षेत्र मा उच्च गुणवत्ता, पेस्ट बनेको र परम्परागत स्थानीय सस संग भर्न छन् जो गहुँ बढ्छ। सबैभन्दा तरकारी गुणस्तर तेल संग अनुभवी सूप को एक किसिम, तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ व्यापक भेडा छ, त्यसैले इटालियनहरू त अक्सर संग ravioli र प्यानकेकहरू देखा छन् ricotta पनीर। पनीर Parmigiano Reggiano - क्लासिक स्वाद। पर्यटकहरु संग एक मासु यात्रामा jerked प्रयास गर्न अवसर पाउनेछन् छम prosciutto, विशेष विधि अर्क छम फलस्वरूप प्राप्त। पनि पाठो वा सुखा आलु skewers मा पकाएको (आईतबार furry furry) संग प्रसिद्ध इटालियन व्यञ्जन। ताजा समुद्री खाना र माछा - संरक्षित तटीय राज्य आधार। इटालियन मिठाईहरू र रक्सी बिना कुनै पनि एक भोजन गर्न सक्दैन, त्यसैले तिनीहरू सबै आगंतुकों Gourmets प्रयास गर्नेछ। इटाली, सपना गायब थिएन, तर एक वास्तविकता बन्न! शानदार यात्रा!
Severka नदी - यात्री लागि ठाउँ
रियो दि जेनेरियो को सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट: एक सिंहावलोकन, वर्णन र समीक्षा
Kazminsky थर्मल वसन्त: तालिका
कालुगा क्षेत्रीय नाटक थिएटर। कालुगा थिएटर: इतिहास, समीक्षा र मुग्ध पार्ने संगीतको
प्लास्टिक माउन्ट Wedges: प्राविधिक विनिर्देशों
सही पक्षमा कान मा आगो: कारण र उपचार